आश्चर्य ! जब २४ वर्ष पुरानो भ्रुणबाट यस्तो बच्चा जन्मियो | NewsSudur
आश्चर्य ! जब २४ वर्ष पुरानो भ्रुणबाट यस्तो बच्चा जन्मियो
एजेन्सी, । २४ वर्ष पहिला सुरक्षित राखिएको एक भ्रुणबाट अहिले एक बच्चाले जन्म लिएको छ ।आईविएफ प्रविधिको खोजी भएपछि गर्भाधान र जन्मबीच यो सम्भवतः सबैभन्दा लामो अन्तर हो । अमेरिकामा उक्त भ्रुण एक परिवारले एउटा संस्थालाई दान दिएका थिए । उक्त भ्रुणबाट जुन महिलाले बच्चाको जन्म दिएकी छिन्, उनी स्वयम् उक्त भ्रुणको गर्भाधानको बेला डेढ वर्षकी थिइन् ।यो बच्चा अब एमा रेन गिब्सन नामबाट चिनिने छिन् । एमाको भ्रुणलाई फ्रिज गरेर २४ वर्षदेखि सुरक्षित राखिएको थियो । यसै वर्ष मार्चमा यो भ्रुणलाई टिना गिब्सनको गर्भाशयमा प्रविष्ट गरिएको थियो । P
एमाको जन्म नोभेम्बरमा भयो । २६ वर्षीया टिनाले सिएनएनसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, म जम्मा २५ वर्षकी भएँ ? यो भ्रुण र म असल साथी पनि हुन सक्छौं ।’उनले भनिन्, ‘मलाई केवल एउटा बच्चा चाहिएको थियो । मलाई यो विश्व रेकर्ड हो कि होइन भन्ने मतलब छैन ।’
राष्ट्रिय भ्रुणदान केन्द्र नाम गरेको संस्थाले यही निषेचित भ्रुण उपलब्ध गराएको थियो । यो भ्रुण लामो समयसम्म फ्रिज हुने तापक्रममा सुरक्षित राखिन्छ । यसकारण चिकित्सकहरुले यो बच्चालाई ‘हिउँको बच्चा भनेर बोलाउँछन् ।अमेरिकाको टेनेसी प्रान्तको नक्सविल शहरस्थित यो संस्थाले यो दम्पत्तिलाई प्रोत्साहन दिएको छ । टिना र बेन्जामिन गिब्सन यो संस्थामा गए, जहाँ उनीहरुलाई यो भ्रुण मिल्यो । सिस्टिक फायब्रोसिस नामको बिरामीका कारण बेन्जामिन बाबु बन्न सक्दैनथे ।एमाको गर्भाधान अक्टोबर १९९२ मा भएको थियो । टिना अब एमाकी आमा हुन् र १९९२ मा उनी करिब डेढ वर्षकी थिइन् । २४ वर्ष पुरानो यो भ्रुण संसारको सबैभन्दा लामो समयसम्म सुरक्षित राखिएको भ्रुण भएको दावी गरिएको छ । बेन्जामिन भन्छन्, ‘एमा एकदमै प्यारो चमत्कार हुन् ।’ उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, यति लामो समयसम्म जमेर बस्दा पनि उनी एकदमै सुन्दर देखिन्छिन् ।’